Dowladda Britain oo Goob Joogayaal u soo dirtay Doorashooyinka Somaliland | Aftahan News
Dowladda Britain oo Goob Joogayaal u soo dirtay Doorashooyinka Somaliland
Hargeysa (Aftahannews)- Dowladda Britain ayaa, Somaliland u soo dirtay 12 Xubnood oo ah goob joogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socon doona doorashooyinka isku sidkan ee Wakiillada iyo Deegaanka, kadib markii ay martiqaad ka heleen Komiishanka doorashooyinka Qaranka.
Goob Joogayaasha ay Dowladda Britain u soo dirtay Doorashooyinka Somaliland
War-saxaafadeed ay goob joogayaashani soo saareen oo nuqul ka mid ahi soo gaadhay Warbaahinta Aftahannews, ayay ku sheegeen inay goob joogayaashan ay maalgeliso dowlada Ingiriiska.
Waxay sheegeen in shaqadoodu noqon doonto u kuurgalida habka ololuhu u socdo, hannaanka doorashadu u dhacayso iyo fulinta shuruucda doorashada iyadoo ay goob joogayaasha caalamiga ah ay arrintaas ka saacidayaan kor joogtada Maxaliga ah.
Goob joogayaasha caalamiga ah waxaa kale oo ay sheegeen inay dusha kala socon doonaan Maalinta doorashada iyo tirinta codadka Waxaa kale oo ay intaas ku dareen in goob joogayaashani ay ka kala socdaan dalalka Uk, Masar, Ethiopia, France, Jarmalka, New Zealand, Koonfur Africa, Maraykanka iyo Zambia.
Michael Walls oo ah madaxa goob joogayaasha caalamiga ayaa sheegay in doorashadani ay ahmiyad weyn u leedahay dimuquraadiyada Somaliland maadaama la qabanayo doorashada Wakiillada oo lagu gelayo Diiwaangelinta codbixiyeyaasha waxaanu xusay in doorashadan ay ku lamaan tahay ta golayaasha deegaanka.
Professor Michael Walls oo ka socda waaxda Horumarinta iyo Qorshaynta ee Jaamacadda UCL, ahna madaxa Kor-joogayaasha Caalamiga ah ayaa yidhi isaga oo daba socda kulan wada shaqayneed oo ay la yeesheen Guddida Doorashooyinka Qaranka:
Madaxa goob joogayaasha caalamiga ah ee doorashooyinka Somaliland ayaa intaas ku daray in afar bilood kadib ay soo saari doonaan warbixintooda.